I-Semalt icebisa izixhobo ze-Web Scraping For Extraction data
i-web scraping okanye amathuluzi okukhutshwa kwedatha yenzelwe ukukhupha ulwazi olubalulekileyo kwi-Intanethi. Ziyaziwa ngokuba yienkqubo zokuvuna zewebhu kwaye zinenzuzo kunoma ubani ozama ukuqokelela idatha kumaphepha ahlukeneyo ewebhu. Kukho inani elikhulu lezixhobo ezikunceda ukukhipha idatha kunye nokuyihlela ngendlela engcono. Ungasebenzisa le nkqubo ukuqokelela ulwazi malunga nemveliso eyahlukeneyo, amaxabiso abo, kwaye unokukhula kwishishini lakho kwi-intanethi - navy fascinator headband hat. Ezinye zewebhu ukucima amathuluzi kunye nesofthiwe zixabiso, ngelixa abanye bangabi nantoni na. Ukuwasebenzisa, unokukrazula ulwazi kwiiwebhusayithi, usebenze kwiinkcukacha ezahlukeneyo uze uququzelele idatha ngokukhawuleza.
Makhe sihlolisise uludwe lwezinto ezi-3 ezisebenzayo zokucoca iifayile zokukhutshwa kwedatha.
1. I-Expert Scraping
Ungasebenzisa i-Scraping Expert ukukhipha, ukuhlela kunye nokwakha ulwazi lwewebhusayithi ehlukileyo. Ngenye yeeprogram ezidumileyo zokukhutshwa kwedatha kwaye ifanelekileyo kubasebenzisi bezorhwebo nabangabasebenzi. Uninzi lwamashishini kunye ne-webmasters khetha i-Scraping Expert ngenxa yezinto zayo ezikhethekileyo kunye nezinto ezininzi. Ukuba unqwenela ukufumana iinkcukacha ezithile zabathengi kwaye ufuna ukukhulisa ukusebenza kwewebsite yakho, kufuneka uzame ukuCima i-Expert. Ulwazi lufikeleleka kwiifom ezahlukeneyo. Ikwahlula idatha kwiimidiya zentlalo, iintengiso zeendaba, ii-portals zokuhamba kunye namaziko okutshintshiselana kwamasheya..
I-Uipath idume ngokubanzi ngeteknoloji yokufunda umatshini kwaye yinkcazelo enkulu yefayili yedatha kunye nethuluzi lokutshiza isikrini. Yilungelelaniso kumabini amakhowudi kunye nakwii-coder kwaye iyakwenza ngokugqithiseleyo ukugqithisa imingeni eyimfuneko yenkcazo yedatha. Unokwenza imisebenzi eyahlukeneyo usebenzisa u-Uipath, udibanisa iiwebhusayithi ezahlukeneyo kunye namaxwebhu e-PDF, fumana ulwazi kwimifanekiso kwaye ungagcina idatha kwi-hard drive yakho. Ungakhokhisa kwakhona ukuloba okubanjwayo, ukuzaliswa kwefom kunye neminye imisebenzi efana ne-Uipath kwaye akudingeki ukuba ube nezakhono zeprogram. Esi sixhobo sitshabalalisa iintlobo ezahlukeneyo zedatha kwisikrini, kwaye iziphumo zifumaneka nge-JS, Silverlight kunye ne-HTML. I-Uipath inceda ukunceda iwebhusayithi zakho kwiinjini zokukhangela kwaye zibiza kakhulu abantu kunye nokuqalisa. Kufuneka usebenzise le nkqubo kuphela xa uneseshishini esekelwe kwi-intanethi kwaye ufuna ukukhangela iiwebhusayithi ezinzima.
Ngenisa i-Import.io enye yezona zixhobo zokutshintshwa kwedatha ephezulu kunye neyokuphezulu. Ungayisebenzisa ngokunjalo izakhiwo zayo ezahlukileyo, kwaye yindlela engcono kwiKimono nakwezinye iinkqubo ezifanayo zokucoca ngewebhu. Kuya kubonisa umzobo ongenakunakwenzeka weenkcukacha ngokusekelwe kwiimfuno zakho kunye nokulindela. Udinga ukugqamisa idatha kwaye ufake ezinye amagama eziphambili uze uvumele i-Import.io isebenze. Unokurhoxisa i-URL enye ngenye kwaye ubeke umgangatho wedata echongiweyo. Import.io ithumela idatha yakho efanelekileyo kwiipredishithi zeGoogle, ukugcina ixesha elininzi kunye namandla. Unokulindela ukuba ikhuphe amakhasi angama-10 000 ewebhu kwiimitha ezimashumi mabini ngokuxhomekeka kobunzima nobude babo. Into emangalisayo kukuba i-import.io ivela ngaphandle kweendleko kwaye iphelele kubantu abangenayo iprogram.